Natiijada Baaritaanka Dadkii Ka Dahacay Degmada Xamar Weyne oo Maanta la Soo Bandhigayo
Sunday October 01, 2017 - 11:15:27 in Wararka by Wariye Qoslaaye
Natiijadii baaritaanka loo xilsaaray Saraakiisha Booliska ee dhacdadii todobaadkii la soo dhaafay ka dhacday degmada Xamarweyne ayaa lagu wadaa in maanta oo Axad ah la soo bandhigo, sida qorshuhu ahaa, horayna ugu dhawaaqay Wasiirka Amniga.
Sida ay sheegayaan wararka Ciidamada Booliska ayaa gacanta ku dhigay nin lagu tuhunsan yahay inuu falkaas ka dambeeyay, kaasoo la sheegayo inuu ka mid ahaa ciidamada dowladda
Wararka ayaa intaa ku daraya in ninkan lagu haayo Xarunta Dambi baarista ee CID, waxaana saacadaha soo socda lagu wadaa in Saraakiisha Booliska iyo Wasiirka Amniga warbaahinta la hadlaan, si ay u faah faahiyaan dhacdadan.
Dhacdadii ka dhacday degmada Xamar weyne ayaa su’aal badan ka dhalatay, qaabkii ay ku baxsadeen kooxo dil ka geystay Xamar weyne oo watay gaari yar, iyadoo halka uu dilka ka dhacay ay ka ag-dhowaayeen ciidamo.
Gaariga la rasaaseyay ayaa waxaa laheydGuddoomiyaha Ururka Haweenka Qaranka, waxaana rasaasta lagu furay ku geeriyooday Canab C/llaahi Xaashi oo aheyd Xoghayaha Ururka iyo wiil ay dhashay Guddoomiyaha oo lagu magacaabayay Axmed Shariif Jaamac.
Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow ayaa sheegay in arrintan aan la aqbali karin in dad lagu dilo Xamar weyne, kadibna la baxsado, waxaana uu ku amray Saraakiisha Booliska inay keenaan dadkii ka dambeeyay, hadii kale ay dad badan xilkooda weynayaan, xitaa isaga.
Todobaadkii la soo dhaafay ayaa waxaa xaafado ka tirsan degmooyinka Waaberi, Xamar jajab iyo Xamar weyne waxaa ka dhacay dilal kala duwan oo loogu geystay illaa shan ruux oo uu ku jiro Jeneraal ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka.
Banaan Bax Looga Soo Horjeedo Somaliland oo Maanta Ka Dhacay Garowe -Sawirro
18/06/2018 - 18:08:17
Sidee Maanta Looga Ciiday Magaalooyinka Garowe iyo Boosaaso ee Puntland ?- Sawirro
15/06/2018 - 18:56:13
Axmed Madoobe oo Dadweyne Badan Salaada Ciida Kala Qeyb Galay Kismaayo -Sawirro
15/06/2018 - 18:45:15
Madaxweyne Farmjo Ayaa Dhambaal Ku Saabsan Ciida u Diray Shacabka Soomaaliyeed -DAAWO
14/06/2018 - 21:40:43
Madaxweyne Farmaajo oo Ka Farxiyey Naafada Ciidanka Xoogga Dalka ee Martiini -Sawirro
13/06/2018 - 22:35:54